Kedu ihe bụ EAT na kedu otu ị ga-esi tinye ya n'ọrụ gị? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ EAT na kedu otu ị ga-esi tinye ya n'ọrụ gị?
José Ignacio | | Marketing, SEO
Na SEO EAT pụtara Ahụmahụ, Ikike na ntụkwasị obi (Ọkachamara, Ikike na Ntụkwasị Obi). Okwu a bu EAT batara n’onwa asato na aho 2018, mgbe emelitere na algorithm nke Google nke akpọrọ mmelite ahụike. Ihe dị mkpa ya sitere na eziokwu na na njedebe ị nwere ike iji ya mee ka arụmọrụ ahụ baa uru na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị.
EAT na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mmelite algorithm Google. Saịtị "Ego Gị, Ndụ Gị" (YMYL) emetụtala nsogbu EAT. Ọ bụrụ na saịtị gị adabaghị na ụdị YMYL, ị nweghị ihe ị ga-atụ egwu. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mkpa ịmara na n'ihi na saịtị e-commerce na-anabata ozi kaadị akwụmụgwọ, a na-ewere ha dị ka peeji YMYL. N'ikwu ya, EAT abụghị algorithm, mana emelitere algorithms nke Google ka ọ chọọ akara maka akara ga-ekpebi ma ha ga-eji ezigbo EAT na-enyocha ọdịnaya. Nri ọjọọ ga-eduga n ’ọnọdụ adịghị mma.
Isi nri nke EAT maka weebụsaịtị YMYL bụ na ha chọrọ onye ọkachamara nwere ikike iji nye ọdịnaya ahụ ma ọ bụ soro ndị nwere ezigbo asambodo rụọ ọrụ. Agbanyeghị, ewezuga ọdịnaya na-achọsi ike nke YMYL - nke na-ejikarị ahụike, ego, ịzụta ma ọ bụ ozi iwu - ọdịnaya nke ndị ọkachamara na-agbaso ụkpụrụ EAT bụ ndị na-egbo mkpa nke ndị na-ege ha ntị ma ghọta ebumnuche dị n'azụ. ajụjụ ma ọ bụ ajụjụ ha na-ewelite.
1 Rie: Onweghi akara ma ọ bụghị ọkwa ogo
2 Gini mere EAT ji di oke mkpa na web peeji gi?
3 Yabụ kedu ka iri nri si emetụta ndị ọbịa saịtị gị?
4 Are bụ ihe ị na-eri
Rie: Onweghi akara ma ọ bụghị ọkwa ogo
Echegbula, enweghi akara EAT dị elu nke ibe gị chọrọ iji nweta. Google algorithm anaghị ekenye akara EAT na saịtị. Adala ụra na-eche ụzọ iji meziwanye akara ahụ. Nri abụghịkwa ọkwa dị ogo. Google nwere ihe dị ogo 200, opekata mpe, gụnyere ọsọ ọsọ peeji, ojiji isiokwu na mkpado aha, na ndị ọzọ. Mana EAT nwere mmetụta na-enweghị isi na ogo peeji gị, ka ọdịnaya ga-adaba na ogo EAT. N'ụzọ dị otú ahụ, ọ na-aghọ ihe ogo.
Nri na-anọchi anya "Ahụmahụ, Nchịkwa, Ntụkwasị Obi."
"Ọkachamara" - You ga-abụrịrị ọkachamara n'ọhịa gị. Ahụmịhe pụtara na ị ga-egosipụta nka nke onye okike nke isi Ọdịnaya (MC) ma kwuo ya na ọdịnaya gị. Ahụmahụ adịchaghị mkpa maka ọchị ma ọ bụ asịrị weebụsaịtị, mana ọ dị mkpa maka weebụsaịtị, ego, ma ọ bụ weebụsaịtị. Ozi ọma ahụ bụ na saịtị ọ bụla nwere ike igosi nka ma ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ bụ eziokwu ma baara ndị ọrụ uru.
"Ikike" - Ikwesiri igosi na ị bụ ikike ma ọ bụ ikike nke onye okike maka MC. You nwere ike nweta nke a site na ahụmịhe nke ndị edemede gị ma ọ bụ gị onwe gị. Ọ bụrụ na ibe gị bụ obodo ma ọ bụ mkparịta ụka, ogo mkparịta ụka ahụ na-akpali ikike. Nzere dị mkpa, mana dịkwa ahụmịhe onwe onye dịka nyocha.
"Ntụkwasị obi" - Ikwesiri igosi ndị ọrụ na ha nwere ike ịtụkwasị obi na onye okike ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke Isi Ọdịnaya, MC n'onwe ya na weebụsaịtị. Elitụkwasị obi dị mkpa karịsịa maka weebụsaịtị e-commerce nke na-ajụ ndị ọrụ maka ozi kaadị akwụmụgwọ ha. Ihe niile dị na saịtị gị kwesịrị ime ka ndị ọrụ nwee nchedo mgbe ị na-eleta ya. Dị ka mmalite, ị kwesịrị ị mejuputa akwụkwọ SSL na saịtị gị ozugbo ọ dịkarịa ala 70% nke nsonaazụ peeji mbụ jiri SSL (ọ bụ otu n'ime ọtụtụ akara akara Google)
Ikwesiri iri nri iji dịrị ndụ. Nakwa ọdịnaya nke weebụsaịtị gị. Adị "iri nri" dị iche, mana echiche a bụ otu.
Nke ahụ ziri ezi, anyị na-ekwu maka iri. Anyị buru ụzọ hụ nkwupụta okwu a mgbe Google bara ntuziaka ọchụchọ na 2014. Mana site na mbido gọọmentị nke Google, anyị maara ugbu a oke mkpa EAT dị. N'afọ a, EAT ga-abụ nnukwu azụmahịa. Ọrụ SEO anyị na-elekọta ime ka saịtị gị rube isi na ihe ndị kachasị mkpa nke Google EAT.
Google kwuputara na EAT so na echiche atọ kachasị elu maka ogo akwụkwọ. Yabụ ọ bụrụ na ị nyebeghi uche maka iri nri tupu oge ahụ, ị ​​kwesịrị ịmalite ịme ya.
Gini mere EAT ji di oke mkpa na web peeji gi?
Ya mere, gịnị kpatara ahụmịhe, ikike, na ntụkwasị obi ji dị oke mkpa? Emechakwa, ụkpụrụ nduzi Google anaghị ekpebi ogo nke ibe.
N'ikpeazụ, EAT na-ekpebi uru weebụsaịtị bara. Ndị na-eme ihe ngosi dị mma na-eri nri mgbe ị na-ekpebi otu saịtị ma ọ bụ ibe na-enye ihe ị chọrọ. Ha na-ele anya iji hụ ma ha na-enweta ezigbo ahụmịhe n'ịntanetị yana ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ ruru ụkpụrụ ha. Ọ bụrụ na ndị rater chere na onye ọrụ ga-enwe ntụsara ahụ n'ịgụ, ịkekọrịta, na ịkwado ọdịnaya ahụ, nke ahụ na-enye saịtị ahụ nnukwu ọkwa EAT.
Chee maka iri nri dịka ndị ọrụ ga - ahọrọ saịtị gị karịa asọmpi gị. Nri nwere ike inwe mmetụta kpọmkwem otu Google si enweta - na n'ikpeazụ n'usoro - weebụsaịtị gị.
Yabụ kedu ka iri nri si emetụta ndị ọbịa saịtị gị?
EAT nwere njikọ chiri anya na ihe Google kpọrọ "Ego Gị ma ọ bụ Ndụ Gị" (YMYL). Ibe YMYL bụ ndị nwere isiokwu gbasara ndụmọdụ ahụike, iwu, ego, ụdị ihe ahụ. Ihe ọ bụla nke nwere ike imetụta obi ụtọ, ahụike, na akụ na ụba nke onye ọrụ ma ọ bụ na-adịghị mma. Ihe atụ gụnyere:
Anlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-ajụ maka ozi kaadị akwụmụgwọ gị
Blog nke nne na-enye ndụmọdụ banyere ịzụ ụmụ
A blog site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na-enye ndụmọdụ gbasara iwu
Ibe ahụike ahụike na-edepụta ihe mgbaàmà nke ọrịa na-adịghị ahụkebe
Ibe YMYL dị elu ga-egosi ọkwa Nri dị elu. Nke ahụ bụ n'ihi na onye ọrụ na-enwekwu obi ike mgbe ọ gara na ibe, yana ka ọdịnaya ahụ dabara na nyocha ọchụchọ ha, ka ọ na-ezute mkpa EAT. Ebe ndị na-enye ndụmọdụ na-enye aka ma ọ bụ ihe ngwọta maka nsogbu ga-egbo mkpa ndị a n'ụzọ dị mfe karịa saịtị ndị na-anwa iji sistemu Google.
Are bụ ihe ị na-eri
Yabụ saịtị gị ga-aba uru dị ka ihe ị tinyere na ya. Ebe ọ bụ na Iri nri na ọkwa peeji na saịtị ahụ, ịkwesịrị ijide n'aka na akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị gị na-anwa ime ihe Google chọrọ. Ma ọ bụrụ na ibe gị tozuru oke dị ka peeji YMYL, nke a dị mkpa karịa.
Ma ọ bụghị naanị were okwu anyị maka ya. Google na-ekwu na ibe ma ọ bụ saịtị na-enweghị EAT bụ "ihe kpatara iji nye ibe akwụkwọ ọkwa dị ala." Yabụ ọ bụrụ na ị bụghị ọkachamara, ikike, ma ọ bụ ntụkwasị obi, enwere ike iwere peeji nke saịtị gị dị ala.
Havekwesịrị ịmepụta ọdịnaya mara mma, nke bara uru na nke ziri ezi. Ikwesiri iji EAT mee ihe iji gboo mkpa nke ma ndi oru ma ndi oru. Mee nke ahụ, ị ​​ga-eme ihe Google chọrọ.
Gbalisie ike idobe ibe a - ị maghị mgbe ị ga-achọ ihe ncheta iji mejuputa EAT nke ọma.
N’ọnwa ole na ole gara aga, ị ga-ahụrịrị mkpọtụ ahụ (ma ọ bụ okwu nchịkwa, kama nke ahụ) “R ER" ”na-ese n’elu mmiri. Ọ bụ ezie na okwu a adịla na lexicon nke ọtụtụ SEOs ruo oge ụfọdụ, ebe ọ bụ na mmelite nnukwu algorithm nke Google na August 2018 (nke a maara dị ka "mmelite ahụike"), etinyegoro nnukwu anya na "EAT» Site na Google, na kemgbe kemgbe ugboro ugboro na egbugbere ọnụ na mkpịsị aka nke ọtụtụ SEOs.
Yabụ kedu ihe m ji ekwu maka ya ugbu a? N'ihi na ụbọchị ị nwere ike ịpụta na Google n'abalị gafere. Iji guzosie ike na Google, ịkwesịrị ịzụlite akara gị site na iwulite nka ya, ikike ya, na ntụkwasị obi ya - nke bụ kpọmkwem ihe EAT pụtara!
Na post a, aga m ekpuchi ogidi atọ nke iri ma kesaa ndụmọdụ banyere otu esi etinye nke ọ bụla n'ime usoro ọdịnaya gị ka ị nwee ike ịkwado maka usoro ọchụchọ kacha mma na ụlọ ọrụ gị.
Na mbu, mmelite "ogwu" a yiri ka o riri otutu webusaiti nke na enye ahu ike na enye ogwu, karie ihe ozo. Ya mere, onye ode akwukwo ahia ahia ahia bu Barry Schwartz kwuputara ya "mmelite ahụike."
Agbanyeghị, mgbe mmelite a ruru ọtụtụ weebụsaịtị ahụike, ọ kụrụ ọtụtụ weebụsaịtị ndị ọzọ enwere ike ịkọwa ya na ihe Google kpọrọ "saịtị YMYL" - ee, okwu wacky ọzọ (na mba, ọ bụghị onye mgbagwoju anya na-abụ abụ ụfọdụ ndị Obodo ).
Ndị na-ere ahịa dijitalụ bụ ndị ama ama maka iji jargon ma nwee ọtụtụ acronyms, mana n'oge a, ọ bụ Google n'onwe ya gbakwunyere YMYL na EAT na mkpo na-eto eto nke nwere ike ịmegharị jargon dị n'ime.
YMYL bụ ogo ogo maka ọdịnaya nke na-anọchi anya "Ego gị ma ọ bụ ndụ gị." Ọ bụghị nanị na Google na-eche banyere ịnye ozi kachasị mkpa, ọ chọkwara ịnye ozi ziri ezi. Iji ụdị ọchụchọ ụfọdụ, enwere ikike dị ukwuu na mmetụta "obi ụtọ, ahụike, ma ọ bụ akụ" ndị ọrụ na-adịghị mma; N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na peeji ndị a dị obere, ha nwere ikike imetụta ọdịmma nke onye ọrụ.
Ya mere, a bịa n'ihe gbasara ahụike, okwu gbasara ego yana nchekwa, Google achọghị ịnye njikọ nke ibe ndị ga - ekekọrịta ndụmọdụ, echiche ma ọ bụ webụsaịtị nwere ike ịkwụ wayo. Google chọrọ ijide n'aka dị ka o kwere mee na ọ na-atụ aro saịtị ndị gosipụtara oke nka, ikike, na ntụkwasị obi, nke bụ ihe EAT pụtara. Ọ bụ ụzọ Google iji kpuchido injin nchọta site na ọdịnaya nwere ogo dị ala nwere ikike imerụ injin nchọ.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị dị n'okpuru akara nke obi ụtọ, ahụike, ma ọ bụ akụ na ụba, mgbe ahụ, iri nri nwere ike ịdị mkpa ka ị ghọta, ya mere gụrụ!
EAT na YMYL sitere na akwụkwọ Google dị oke mkpa nke a maara dị ka "Ntuziaka Ntụziaka Ogologo Ọchụchọ Google."
Na 2015, Google bipụtara Ntuziaka ya maka Nchọpụta Ogologo Nchọta na nke a nyere anyị echiche nke ihe a na-ewere dị ka weebụsaịtị (ma ọ bụ dị ala), site na Google.
Edere akwụkwọ ahụ maka otu ndị otu na-eme gị, nke na-eme nyocha dị mkpa elekere na elele weebụsaịtị wepụtara nsonaazụ Google maka ọchụchọ ndị ahụ. O doro anya na mmadụ 10.000 ndị Google na-arụrụ ọrụ iji mepụta nyocha ndị a, usoro emere iji nwalee ịdị irè nke algorithms ogo n'ịghọta ogo nke ibe weebụ.
Ozizi otu QA na-agwa ndi injinia Google ka ha meziwanye algorithm ogo. Dị ka ndị ọrụ Google na-echetara anyị, algorithm ogo ha bụ usoro nke mmelite na-aga n'ihu, yana mmelite oge niile.
The Oxford ọkọwa okwu na-akọwa okwu ahụ bụ "ọkachamara" dị ka "ezigbo maara ihe ma ọ bụ nwee nkà na otu ebe." Agbanyeghị, ịnweta ihe ọmụma a naanị agaghị enweta ọtụtụ okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị gị sitere na Google.
Ikwesiri ighota otu esi ekwuputa ihe omuma a n'uzo ndi mmadu. Ọ bụ naanị ịnweta ozi ahụ, kamakwa ịmara ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ na ụzọ kachasị mma iji nyefee ha ozi ahụ.
Mgbe ọ bụla onye Googler jụrụ ajụjụ ahụ "Kedụ ka saịtị m ga - esi meziwanye ọkwa ya?" Nzaghachi omume na-adịkarị ka ọ dị ka, "Mepụta ọdịnaya dị ukwuu nke ndị na-ege gị ntị ga-amasị." Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị ka azịza na-adịchaghị mfe (ma ọ bụ), ọ bụ azịza nke na-achịkọta ihe m na-ede na post a, ime ihe n'eziokwu.
Kedu ka anyị si emepụta ọdịnaya ọkachamara? Lee, lee ụfọdụ ndụmọdụ iji zaa ajụjụ a:
Chọpụta ihe ndị na-ege gị ntị na-achọ, wee zute ma gafee mkpa ha. Nke a na-amalite site na nyocha isiokwu.
Gbalịa ịghọta ebumnuche nke igwe ọchụchọ n’azụ okwu ị chọpụtara n’oge nyocha isiokwu ahụ.
Ikwesiri ighota uzo uzo igwe nyocha a di na njem gi dika ndi ahia ma obu dika mmadu itinye aka na ulo oru gi. Enwere ọtụtụ ọnọdụ ebe a, dabere na ikpe gị, mana ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ, dịka ọmụmaatụ, okwu ọchụchọ nke doro anya maka onye dị ọhụrụ na isiokwu ahụ, gbalịa ka ị ghara iji ọtụtụ jargon na / ma ọ bụ mgbọ n'echiche nke ọhụụ agaghị enwe ike ịghọta.
Chọta nguzo dị n'etiti ịkwado na ime ka ọ dị mfe. Nke a na-agbadata ịhazi ederede ka ọ bụrụ nke nwere ike ịgbagha, na-eji ihe ngosi ọhụụ ma ọ bụ mgbasa ozi bara ụba dịka vidiyo ma ọ bụ ọdịyo. Ezigbo ihe atụ nke a bụ usoro "Whiteboard Friday" nke Moz. Anyị chọrọ ka ndị na-eri ọdịnaya ahụ ghọta isiokwu ahụ n'ikpeazụ, n'emeghị ka ọ na-agwụ ike.
Chee echiche banyere ajụjụ ndị na-esote na njin ọchụchọ nwere ike ịnwe ma nwee ọdịnaya dị njikere ịza nke ahụ. Ihe mgbakwunye mgbakwunye kwesịrị ekwesị ga-abụrịrị njikọta na mfe ịnweta. Ọ bụ maka ịghọ isi mmalite nke ozi n'ọhịa gị.
Bụ ọkachamara dị mma, mana ọ bụ mmalite. Mgbe ndị ọkachamara ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na - eme ihe ike na - ekwu gị dị ka isi iyi nke ozi ma ọ bụ mgbe aha gị (ma ọ bụ akara gị) ga - abụ otu ihe na isiokwu ndị dị mkpa, mgbe ahụ ị bụghị naanị ọkachamara - ị bụ ikike.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime KPI mgbe ọ na-ekpe ikpe ikike gị:
Njikọ weebụsaịtị ndị dị mkpa na ikikere bụ n'ezie nnukwu ihe mgbe ọ na-abịa n'ịntanetị weebụsaịtị na anyị enweghị ike ịtụle usoro ọ bụla maka ịga nke ọma SEO na-enweghị mesie nke a ike.
N'ọnọdụ ọ bụla, a ghaghị imesi ya ike na mgbe anyị na-ekwu maka njikọ, ọ bụ maka iwu ikike nke ngalaba gị. Nke a pụtara na anyị chọrọ weebụsaịtị ndị nwere ike ịnwe ikike na oghere iji kwado anyị ma ọ nweghị nkwado ka mma weebụsaịtị nwere ike ịnweta site na onye nwe weebụsaịtị ọzọ karịa njikọ.
Ọ bụ ezie na njikọ dị mma, naanị ịkpọtụ aha na akụkọ akụkọ ma ọ bụ na weebụsaịtị nwere ikike na oghere gị ka ga-abawanye ikike gị, n'anya Google. Yabụ, ịkpọtụrụ aha bụkwa ihe ịgbalịsi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Kedu ihe bụ EAT na kedu otu ị ga-esi tinye ya n'ọrụ gị?
Kedu ihe dị iche na ecommerce na ahịa?
Etu esi abawanye ahia ecommerce